Izinhlobo zezitshalo zokufakelwa ziningi futhi izitayela ziphelele. Ngokusekelwe emcabangweni wokuthi "luhlaza okotshani, obumvelo, obuhle futhi obuhle", silwela ukudala imakethe engafani nenye yezitshalo ezenziwe, ukuze sikwazi ukwenza lula impilo yabantu, ishintshe ubuhle ...
Kukhona abakhiqizi bezitshalo abasebenza ngokwengeziwe emakethe.Ngakho-ke, izidingo zekhwalithi eziqinile ziyadingeka ukuvela kwabakhiqizi abaningi. Manje ake wethule ngokulawulwa kwekhwalithi yenkampani yethu: Okokuqala: Izinto ezikhethiwe ezingakhekile: izinhlayiya zepulasitiki (1) Zonke kungeniswa i-Pe n ...
Sonke siyazi ukuthi izitshalo zangempela zidinga ukugcinwa, kanti nezimbali zokufakelwa zezihlahla nazo zidinga ukugcinwa. Ake wethule kafushane ulwazi lokugcinwa kwezitshalo zokwenziwa. Izitshalo zokufakelwa zenziwe ngemikhiqizo yamakhemikhali ngemuva kokuhlanjululwa, babe nokunye okufanayo ...